मानसिक स्वास्थ्य कलंक, र तपाईं यसलाई पार गर्न कसरी मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा मनोरञ्जन भारी खेल समुदाय, कल्याण औषधि बनाम मित्र कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण घरपालुवा जनावर कम्पनी, औषधि जानकारी खेलहरु प्रेस कम्पनी, चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समाचार, कल्याण
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> मानसिक स्वास्थ्य कलंक - र यसलाई कसरी पराजित गर्ने
मानसिक स्वास्थ्य कलंक - र यसलाई कसरी पराजित गर्ने
कलंक परिभाषित गर्दै | किन यो समस्या हो | यसको अन्त्य गर्न कार्य चरणहरू | उपचार विकल्पहरू उपलब्ध छन् | सहयोगी साथीहरु र परिवार
मानसिक स्वास्थ्य कलंक एक विशाल समस्या हो कि धेरै मानिसहरु लाई उपचार प्राप्त गर्न लाज लाग्छ लाज लागी लाज लाग्छ। यहाँ छ के तपाईं यसलाई कम गर्न के गर्न सक्नुहुन्छ र विकल्पहरू उपलब्ध छन् यदि तपाईंलाई सहयोग चाहिएमा।
समुदायमा पार गर्नको लागि एकल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवरोध भनेको मानसिक र व्यवहारिक विकारबाट ग्रस्त व्यक्तिहरूप्रति कलंक र सम्बद्ध भेदभाव हो। - अध्याय,, २००१ विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
विश्व भर मा, मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा पेशेवरहरु र सामान्य नागरिकहरु को मन मा एक जस्तै छ। यो स्पष्ट भएको छ कि मानसिक स्वास्थ्य स्थितिले लाखौंलाई असर गर्छ - र जागरूकता बढेको छ कि मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरू केवल पागल, खतरनाक, वा नराम्रो मान्छे होइनन्। तर अधिक पारदर्शी र स्वीकार्य भविष्यतर्फको प्रगति कुनै अवरोधहरू बिना छैन।
कलंक मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको साथ बाँचिरहेका व्यक्तिहरूको लागि सबैभन्दा निरन्तर बाधाहरूको बीचमा रहन्छ। चिकित्सा अनुसन्धानले देखाउँदछ कि मानसिक रोग वास्तविक छ, र लाज मान्नुपर्ने कुनै कुरा होइन - तर धेरै मानिसहरूले यस धारणालाई अस्वीकार गर्छन्, र समाज वा तिनीहरूको व्यक्तिगत जीवनमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको कुनै संकेत। आधारभूत गलत जानकारीबाट लक्षित भेदभाव सम्म मानिसहरूले मानसिक रोगलाई अस्वीकार गर्ने धेरै कारणहरू छन्।
कहिलेकाँही अज्ञात व्यक्तिहरूले मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको बारेमा मिथ्या र धारणा फैलाउँछन्। यसले सामान्य मानसिक स्वास्थ्य वरिपरि कलंक बनाउँछ र अधिक स्थिर। यो विशेष इमान्दार र विचारशील मानसिक स्वास्थ्य जानकारीको पहुँच छैन कि सामान्य भ्रम धारणा खण्डन को लागी हानिकारक हुन सक्छ। यो पनि आत्म कलंक, मानसिक विकारहरु बाट पीडितहरु मा नकारात्मक दृष्टिकोण को आन्तरिककरण को कारण हुन सक्छ।
मानसिक स्वास्थ्य कलंक र नकारात्मक स्टिरियोटाइपहरू तिनीहरूका सबै रूपहरूमा सक्रिय रूपमा अस्वीकार गर्न आवश्यक छ। थाहा छ कि कलंक एक ठूलो समस्या हो पर्याप्त छैन। परिवर्तन मात्र कार्यहरु संग हुन्छ।
सामाजिक समूहहरू र समुदायहरूले एक साथ ब्यान्ड गर्न आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य कलंक समाप्त गर्न। यसको मतलब साथीहरू र छिमेकीहरूसँग निरन्तर अद्यावधिक मानसिक स्वास्थ्य जानकारी साझा गर्नु हो। मानसिक रोगका साथ बाँचिरहेका व्यक्तिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सुन्न र दैनिक जीवनमा यस विषयमा बोल्न सिक्नुहोस्। यी कार्यहरूले समर्थन नेटवर्कहरू निर्माण गर्न सक्दछन् जुन प्रभावकारी रूपमा कलंक अवरोधलाई कम गर्दछ र आवश्यक पर्नेहरूलाई अझ राम्रो बनाउन मद्दत गर्दछ तिनीहरूले योग्यको मद्दत लिनको लागि।
मानसिक स्वास्थ्य कलंक परिभाषित
अधिकांश व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य कलंक पूर्ण रूपमा बुझ्दैनन्। कलंक-लडाई प्रयासमा टाउको पहिले उफ्रिनु भन्दा पहिले तपाईले एक वा दुई पछिल्नु पर्ने हुन सक्छ। सर्वप्रथम, विस्तृत व्याप्ती र प्रस understand्ग बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् जुन हालको प्रवचन भइरहेको छ। उदाहरण को लागी, उचित शब्दावली संग जान र प्रयोग गर्न को लागी उपयोगी छ। यसले मानसिक रोगसँग बाँचिरहेकाहरूका लागि राम्रो सहयोगी बन्न मद्दत गर्दछ।
सामान्य रूपमा स्टिग्मास
मानसिक स्वास्थ्य कलंक बुझ्नको लागि, तपाईंले कलंकको अर्थ बुझ्नु पर्दछ, र यसले मानिसहरूलाई कसरी चोट पुर्‍याउँछ। सामाजिक कलंक एक सक्रिय वा निष्क्रिय उपाय हो जुन उनीहरूको ज्ञात सुविधाहरूको आधारमा व्यक्तिविरूद्ध भेदभाव गर्न प्रयोग गरिन्छ। सामाजिक कलंकहरू दुबै परिवर्तनशील र अपरिवर्तनीय व्यक्तिगत विशेषताहरू लक्षित गर्न सक्दछन्, जसमा दौडदेखि मानसिक स्वास्थ्य स्थिति सम्म सबै थोक समावेश छ।
कलंक-कलंककारी सम्बन्धको बारेमा विस्तृत अनुसन्धान अवस्थित छ। तर सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जान्नको लागि यो हो कि कलंकमा परेका व्यक्तिहरूले प्रायः केही हदसम्म सामाजिक अवमूल्यन महसुस गर्दछन् किनभने उनीहरूका विशेषताहरूको कारण। यसले समयसँगै एक्स्ट्राइजेसन र एक्लोसेसन, वा अधिकार आंकडाको हातमा स्पष्ट भेदभावको कारण निम्त्याउँछ।
मानसिक स्वास्थ्य कलंक यस श्रेणी मा पर्दछ। मानसिक रोगको साथ बाँचिरहेका व्यक्तिहरूले दैनिक जीवनमा सक्रिय र निष्क्रिय विभेदको अनुभव गर्छन्। यसले सामाजिक सments्लग्नतादेखि लिएर आवास विकल्पहरूमा सबैलाई असर गर्दछ। यो असमान उपचारले जीवनको गुणस्तरलाई घटाउन सक्छ र उचित उपचार खोज्न अझ गाह्रो हुन्छ।
मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धित Stigmas
शताब्दीयौंदेखि मानसिक स्वास्थ्य कलंक विभिन्न रूपहरूमा विद्यमान छ। यो व्यक्ति द्वारा स्थायी छ, तर लोकप्रिय मिडिया र सामाजिक मानदण्डहरु पनि दुनिया भर मा समुदायहरु मा कलंक को सुदृढीकरण।
मानसिक स्वास्थ्य कलंकको दुई भाग हुन्छन्। पहिलो, मानसिक रोगको अदृश्य (वा बरु, स्पष्ट छैन शारीरिक) प्रकृति छ। मतलब, भाँचिएको पाखुरा जस्तो छैन, तपाई सजिलैसँग देख्न सक्नुहुन्न जब कोही उदास हुन्छ। दोस्रो, मानसिक रोगको केहि अभिव्यक्तिहरूले सामाजिक आदर्श स्थापित गरे। उदाहरण को लागी, एक manic द्विध्रुवीय चरण मा कसैले धेरै संग कुरा जब अरु संग बाहिर। सँगै लिएर, यी कारकहरूले एक व्यक्तिको उपचार नगरी वा राम्रोसँग व्यवस्थित मानसिक स्वास्थ्य अवस्था अप्रत्याशित, वा डरलाग्दो देखिन सक्छन्। बदलेमा, केहि व्यक्तिहरू (अनुचित रूपमा) यो अप्रत्याशिततालाई खतराको रूपमा आन्तरिककरण गर्छन् जसले उनीहरूलाई विश्वास वा कलंक फैलाउन सक्छ।
यद्यपि यो सामान्य छ, मानसिक स्वास्थ्य कलंक दैनिक जीवन को एक प्राकृतिक हिस्सा को रूप मा स्वीकार गर्नु हुँदैन। मानसिक र स्वास्थ्य दुर्गन्धहरु, दुबै ठूला र नाबालिगहरु, उनीहरुका सबै अभिव्यक्तिका लागि हानिकारक हुन्छन् र व्यक्तिको आफ्नै मानसिक स्वास्थ्य अवस्थालाई पहिचान गर्न सक्ने क्षमतालाई आवश्यक ढंगले कम गर्न र आवश्यक परेको बेला उचित सहयोग लिन सक्छ।
किन कलंक एक ठूलो समस्या छ
मानसिक स्वास्थ्य कलंकहरू एक ठूलो समस्या हो भनेर भन्दै एक ओभरस्प्लीफिकेशन हो। वास्तविकतामा, मानसिक स्वास्थ्य कलंकहरू व्यापक र व्यापक समस्याहरू हुन् जुन कुनै व्यक्तिको जीवनको कुनै पनि पक्षलाई छुन्छ। यदि तपाईं आफ्नो समुदाय र सामाजिक सर्कलहरूमा मानसिक स्वास्थ्य कलंकहरू सम्बोधन गर्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, लडाईंमा लड्नु भन्दा पहिले कलंकको गम्भीर प्रभावलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नको लागि निश्चित समय लिनुहोस्।
मानसिक स्वास्थ्य कलंकहरू दुई व्यापक कोटीहरूमा पर्दछन्: कलंक फैलिने तरिकाहरू र यसलाई अनुभव गर्ने व्यक्तिहरूमा कलंकको प्रभाव। दुबै कोटीहरू समग्र सम्बोधन र सही कलंकको लागी महत्वपूर्ण छ।
तरिका कलंक फैलिन्छ
कलंक फैलाउने तरिकाहरू व्यक्तिमा परेको प्रभाव भन्दा बढी देख्न सकिन्छ। यी ती कार्यहरू र शब्दहरू हुन् जुन मानसिक बिरामी भएका व्यक्तिहरूको बिरूद्ध आन्तरिक पक्षपाती हुन्छन् become र दैनिक भाषणदेखि लिएर नीति निर्माणसम्म सबै कुराको खोजी गर्दछन्। यद्यपि निम्न सूची पूर्ण छैन, यद्यपि मानसिक स्वास्थ्य कलंक फैलिने प्राय: सबै भन्दा साधारण विधिहरू हुन्।
शब्दहरू, र उनीहरूको नकारात्मक अर्थले, मानसिक रोगको साथ एक व्यक्तिले आफूलाई कसरी बुझ्ने, र ठूलो समाजले कसरी त्यस व्यक्तिलाई हेर्छ भन्नेमा वास्तविक प्रभाव पार्न सक्छ। जसरी समाजले मानसिक स्वास्थ्य र मानसिक रोगको बारेमा कुरा गर्दछ यसले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्न सक्दछ यसले कसरी अनुभव गरिरहेका व्यक्तिहरूप्रति।
माइक्रोग्रेसिजनहरू सानो मौखिक सations्केतहरू हुन् (दुबै जानाजानी र अन्जानमा) जुन लक्षित समूहको बिरूद्ध शत्रुता वा नकारात्मक पूर्वाग्रह कुराकानी गर्दछ। माइक्रोग्रेसिजनहरू दुर्घटना हुन सक्छ, वा राम्रै मनसायले हुन सक्छ, तर अझै पनि प्रभावित समूहका सदस्यहरूका लागि आपत्तिजनक हुन सक्छ।
कसैलाई पागल भन्नु वा उनीहरूले औषधि लिनुभयो कि भनेर सोध्नु मानसिक स्वास्थ्य समुदाय बिरूद्ध माइक्रोएग्गेरेसनको उदाहरण हो।
एक मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको साथ बस्ने व्यक्तिहरूलाई लक्षित माइक्रोएग्ग्रेसनहरू शारीरिक अपा with्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हावामा पुर्‍याउन प्रयोग गरिएको भाषासँग समानता साझा गर्दछन् (यद्यपि धेरै कम सूक्ष्मताको साथ)। सटीक शब्द र वाक्यांश सेटिंग्स को लागी सेटिंग मा फरक हुन्छ, तर लगभग सबै माइक्रोएग्ग्रेशन्स प्रभावित व्यक्ति वा समूह अवैध वा शर्मिंदा गर्न को लागी। केहि माइक्रोएग्गेरेसनहरूले सामान्यतया मानसिक रोगको बारेमा गलत तरिकाले डराउने कुराकानी गर्दछ।
माइक्रोएग्ग्रेशन्स एउटा तरिका हो जुन व्यापक सामाजिक कलंकहरू जस्तै मानसिक स्वास्थ्य कलंक-सामाजिक सर्कलमा फैलिएको हो। केही व्यक्तिहरू भन्छन् कि माइक्रोएग्ग्रेशन्सलाई अत्यधिक सेल्फ सेन्सरिंग चाहिन्छ, कि प्रभावित व्यक्तिहरू अति संवेदनशील छन्। तर त्यो धारणा मानसिक रोगले ग्रस्त व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने कुरामा केन्द्रित प्रवचनमा फलदायी हुँदैन।
माइक्रोग्रेसिजनहरू भाषाको मानसिक स्वास्थ्य कलंक लाई स्थायी गर्ने विशिष्ट उदाहरणहरू हुन्। नेगेटिभ मेसेजिंग मानसिक स्वास्थ्य कलंकहरू फैलाउने एक विस्तृत विधि हो। यो संचार सामग्री हो (प्राय: लोकप्रिय मिडियामा) जसले मानसिक स्वास्थ्य र मानसिक रोगका साथ बस्ने व्यक्तिहरूको बारेमा भय र गलत जानकारी फैलाउने ठूलो उद्देश्य गर्दछ।
उदाहरण को लागी, टेलिभिजन कार्यक्रमहरु को लागी कसैलाई स्किजोफ्रेनिया को साथ चित्रण गरी सर्त को मानिसहरु को बारे मा खतरनाक फैलाउने नकारात्मक सन्देश हो।
नकरात्मक सन्देश अनावश्यक अज्ञानबाट उत्पन्न हुन सक्छ। यो फारम प्रायः बच्चाहरू र युवा वयस्कहरूमा देखा पर्दछ जसले मानसिक रोगको शब्दावलीसँग सम्बन्धित उचित सामाजिक नियमहरूलाई पूर्ण रूपमा बुझ्दैनन्। यस प्रकारको अज्ञान वयस्कतामा टिक्न सक्छ यदि यसलाई कुशलतापूर्वक सुधार गरिएको छैन।
यद्यपि, प्रायः नकारात्मक सन्देश पठाउने व्यक्ति वा समूहहरू जसले नतिजा बुझ्छन् त्यसको लागि जानाजानी बेवास्ता गर्दछ, तर जे भए पनि हानिकारक भाषा प्रयोग गर्दछ। परम्परागत मिडिया र सामाजिक मिडिया दुबै यस डोमेनमा संचालन गर्दछ, आधिकारिक रूपमा मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा गलत धारणा दोहोर्‍याउँछ।
प्राकृतिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएच) मा प्रकाशित एक अध्ययनले त्यो पत्ता लगायो 39 मानसिक स्वास्थ्यको कम्तिमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका मुख्य समाचारपत्रहरू कभरेज र हिंसाको बारेमा थियो।
एउटा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिकामा बन्दूक नियन्त्रण र नियमनको वरिपरिको बहस हो। यो एक उपद्रवी विषय हो, तर केहि समाचार स्रोतहरू र वकालत समूहहरूले मानसिक रोगको उपचारको बारेमा कुराकानीलाई कम गर्छन्। जबकि मानसिक स्वास्थ्यको स्तर सुधार गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, सामूहिक गोलीबारीमा बलीको बोकाको रूपमा मानसिक स्वास्थ्य समस्यासहित बाँच्ने मानिसहरूलाई प्रयोग गरेर मानसिक स्वास्थ्य अवस्था भएका सबै व्यक्तिहरूलाई लक्षित हिंसात्मक कलंक फैलाउँछ।
अनुचित लेबलिंग नकारात्मक सन्देशको हिस्सा हुन सक्छ। यो प्रायः मानसिक रोग र व्यक्तिको जीवनमा यसको उपस्थिति छलफल गर्ने क्रममा देख्न सकिन्छ। परम्परागत रूपमा, स्किजोफ्रेनिक पुरुष वा द्विध्रुवी महिला जस्तो वाक्यांशहरू सामान्य थिए। अब, विकलांगता सम्बन्धी वार्तालाप भरमा पहिलो व्यक्तिको भाषा प्राथमिकता दिइन्छ। उदासिन व्यक्ति जस्ता वाक्यांशहरू प्रयोग गर्नका लागि स्वीकृत (वा आवश्यक, बहु र सरकारी शैली निर्देशिकाहरूमा देखाइएको) शब्दहरू हुन्।
सामाजिक आर्थिक, रोजगार, र आवास
मानसिक स्वास्थ्य अवस्थासँग बाँचिरहेका व्यक्तिहरू (दुबै निदान गरिएको र निदान नहुने) कम सामाजिक-आर्थिक कोष्ठकमा पर्न जान्छ जुन मानसिक रोगको दीर्घकालीन प्रभावहरूमा प्रायः संवेदनशील हुन्छ। यसले गरिबप्रति नकारात्मक पक्षपात गर्ने व्यक्तिहरूबाट क्रसओभर भेदभाव निम्त्याउन सक्छ।
मानसिक रोगबिमार भएका व्यक्तिहरूमा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति विभिन्न कारणहरू हुन्, रोजगारी र आवासमा संरचनात्मक भेदभाव सहित। को मानसिक रोगको बारेमा राष्ट्रिय गठबन्धन रिपोर्ट गर्दछ कि मानसिक रोग (वा यसको धारणा) को उपस्थितिले एक व्यक्तिलाई समान रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त गर्नबाट रोक्न सक्छ।
मोटामोटी रूपमा भन्नुपर्दा, काममा लिने क्रममा यो असमानता रोजगारीका धारणाको कारणले हुन्छ कि मानसिक रोगका व्यक्तिहरू आफ्नो कार्यको पूर्ण नियन्त्रणमा छैनन्, नामीका लेखक लुना ग्रेनेस्टीन भन्छन्। यसका साथसाथै यी समान रोजगारदाताहरूले स्वास्थ्य अवस्थाको सट्टा सम्भावित कर्मचारीमाथि असामान्य कार्यहरूको लागि पूर्ण दोष राख्छन्, जसको मतलब अन्यथा योग्य उम्मेद्वारहरूलाई विचारबाट हटाउनु हो।
यी विभेदकारी हायरिंग अभ्यासहरूको परिणाम स्वरूप, मानसिक रोगका साथ काम गर्नेहरू आफ्नो न्यूरोटाइपिकल सहकर्मीहरू भन्दा कम ज्याला कमाउँछन्। यसले भर्या .लाई माथि सार्न गाह्रो बनाउन सक्छ, र भविष्यको स्थितिहरूमा उच्च क्रमिक मजदूरी कमाउन सक्छ। केही मानसिक स्वास्थ्य अवस्था भएका व्यक्तिहरूले यी विभेदकारी हायर गर्ने अभ्यासहरू अधिक प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्छन्। उदाहरणका लागि, त्यहाँ स्किजोफ्रेनिया भएका व्यक्तिहरूमा बेरोजगारी दर %०% देखि% ०% छ मानसिक स्वास्थ्य को राष्ट्रीय संस्थान ।
थोरै वित्तीय सम्पत्तिले उपयुक्त आवास पाउन गाह्रो बनाउँदछ। आवास संस्था र सम्पत्ती मालिकहरूबीच कानूनी र गैरकानूनी भेदभावले समस्यालाई झनै नराम्रो बनाउँछ। जब अनादर नगरीकन छाडिन्छ, यो संरचनात्मक भेदभावले घरबारविहीन हुन सक्छ र कठोर घरबारविहीन नियमहरू भएको ठाउँमा कैद पनि हुन सक्छ।
mirena तौल बढ्न र मुँहासे कारण हुन्छ
१ 68 of68 को फेयर हाउसिंग ऐन जस्ता संघीय कानून, पक्षपातपूर्ण आवास भाडा र बिक्री अभ्यासबाट केही सुरक्षित वर्गहरूमा व्यक्तिहरूमाथि संरचनात्मक भेदभाव रोक्नको लागि डिजाइन गरिएको हो। १ 1990 1990 ० मा अपा Americans्गता सम्बन्धी ऐन (एडीए) कानूनको एक अंगका रूपमा अशक्तता भएका व्यक्तिहरूलाई यी संरक्षणहरूमा थपिएको थियो। तर, यी सुरक्षाहरू मूर्ख छैनन्। मानसिक रोगले ग्रस्त व्यक्तिहरू विरुद्ध गैर-स्पष्ट आवास भेदभाव अझै पनि देखा पर्दछ।
Stigmatiization मानसिक रोग संग बाँचिरहेका व्यक्तिहरु को लागी गम्भीर प्रभाव पर्छ। यसको प्रभाव तीव्र मानसिकता स्वास्थ्य देखभाल खोज्न को लागी एक स्थायी अनावश्यक को लागी कम आत्म-मूल्यमा मा सीमा मा हुन सक्छ। निम्नलिखित सूचीमा मानसिक स्वास्थ्य कलंकको निरन्तर जोखिमको केही सम्भावित प्रभावहरू समावेश छन्।
उपचारको पहुँच घटाइयो
यो सामान्यतया स्वीकार गरिएको छ कि अधिकतर विकलांगता र दीर्घकालीन रोगको उपचार गर्न लायक छ। र, बिरामी र अशक्तता भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार गर्न सकिदैन, उनीहरूलाई उनीहरूका सर्तहरूमा समृद्ध जीवनशैली बाँच्न प्रत्येक अवसर दिइनु पर्दछ। दुर्भाग्यवस, यो समझ मानसिक स्वास्थ्य मुद्दाहरूमा पूर्ण रूपमा फैलिएको छैन।
मानसिक रोगबाट ग्रस्त व्यक्तिहरूले सहयोग वा उपचारका अवसरहरू कम पाउँदछन् किनकी अवस्थित कलंकका कारण। उदाहरण को लागी, मानसिक रोग संग व्यक्ति गलत को लागी जिम्मेवार को रूप मा मानिन्छ, वा को नियन्त्रण मा, आफ्नो अशक्तता को। नतिजा स्वरूप, तिनीहरू उपचार अवसरहरूको कम योग्यको रूपमा देखिन्छन्।
जे होस् त्यहाँ केहि शर्तहरु लाई कम कलंक छ, पहुँच घाटा बोर्ड भर मा देखा पर्दछ - को लागी दीर्घकालीन रोग, अशक्तता, र मानसिक रोग को लागी। यदि तपाईं आफ्नो स्थानीय समुदायमा यी घाटाहरूको समाधान गर्न काम गर्दै हुनुहुन्छ भने सम्भव भएसम्म समावेशी र क्रॉस-सेक्शनल हुन प्रयास गर्नुहोस्।
मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरू आवश्यक पर्नेहरूका लागि सजिलैसँग उपलब्ध हुनुपर्दछ; यस प्रकारको अवस्था शारीरिक बिरामीले गर्दा हुने भन्दा फरक हुँदैन। यदि तपाईं वा कुनै प्रियजन मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको साथ बस्नुहुन्छ भने, कलंक विरुद्ध लड्न र मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरहरूको सहयोग लिनु महत्त्वपूर्ण छ। बच्चाहरू र युवा वयस्कहरू प्रायः आफ्ना भावनाहरू सटीकताको साथ संवाद गर्न संघर्ष गर्दछन्, त्यसैले स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरहरू र आमाबाबुले प्रायः मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको प्रारम्भिक लक्षणहरू गुमाउँछन् वा उनीहरूको टाउकोमा सबैको रूपमा लेख्छन्। यसको मतलब यो हो कि संघर्ष गरिरहेका किशोर-किशोरीहरूले जीवनको पछि सम्म उचित मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्दैनन्।
जब उनीहरू मद्दत लिन्छन्, निदान वा उपचार नगरिएको मानसिक रोग भएका मानिसहरूलाई किफायती सहायताको संरचनात्मक घाटा सामना गर्न सक्छ। प्राय: त्यहाँ कुनै खास क्षेत्रमा मानसिक रोगका लागि विशेष रूपमा सार्वजनिक सार्वजनिक हेरचाहको स्रोतको अभाव रहेको छ। यस समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास धेरै क्षेत्रहरूमा जारी रहेका छन्, तर मानसिक स्वास्थ्य कलंकले विस्तारलाई सुस्त बनाउँछ।
अलग र खलनायक
मानसिक स्वास्थ्य कलंक सधैं छ र यो अनुभव गर्नेहरूका बीचमा अस्थायी अलगाव को भावना को कारण जारी छ। यो केवल मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको निदान गर्ने व्यक्तिहरू मात्र होइन। मानसिक रोगको लागि सीधा सम्बन्ध भएको जो कोही, जस्तै मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको साथ बस्ने परिवारका सदस्यहरूले, एक्लोसनको अनुभव गर्न सक्दछन्।
एक्लोपनेसको यो भावनाले स्वास्थ्य चुनौतिहरूको साथ सबैको कलंकित पृथक प्रतिध्वनित गर्दछ, चाहे तिनीहरू मानसिक वा शारीरिक हो। तर मानसिक स्वास्थ्य अवस्था भएका मानिसहरुका लागि अदृश्य प्रकृतिका कारणले यो अझ चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। जब बिरामीलाई ना the्गो आँखाले हेर्न सकिदैन, यो सजीलो महसुस गर्न सजिलो छ, वा एक्लै संघर्षमा।
यो एक्लोपनाको भावनाले सामाजिक सीपलाई हानी पुर्‍याउँछ र प्रियजन वा समुदायको समर्थन बिना कठिन घटनाहरूसँग लड्न गाह्रो बनाउँदछ। समयको विस्तारित अवधिमा, अलगाव व्यक्तिगत व्यक्तिको विश्व दृश्यको सामान्य अंश हुन्छ, र आत्मसम्मान वा आत्म-मूल्यको धारणालाई क्षीण पार्न सक्छ। यी नकरात्मक प्रभावहरूले गम्भिर रूपमा व्यक्तिको जीवनको गुणस्तरलाई असर गर्न सक्दछन्।
केहि अवस्थाहरूमा, मानसिक रोगका साथ जिउने व्यक्तिहरूको खलनायक हुन्छ। अर्थ, तिनीहरूको पुरानो स्थिति अरूलाई पूर्वाग्रह गर्न प्रयोग गरिन्छ। सामाजिक लांछनको यो छुट्टै रूपले संकेत गर्दछ कि मानसिक रोगको साथ बस्ने व्यक्ति आफ्नो न्यूरोटाइपिकल समकक्षाहरू भन्दा कम मानव हो, र एक व्यक्तिलाई अगाडि टाढा राख्ने मात्र सेवा गर्दछ।
लोकप्रिय मिडिया ऐतिहासिक रूपमा एक खलनायकको खराबीको खराब अभिप्रायलाई श्रेय दिन्छ। आज पनि, समाचार मिडिया (दुबै जानाजानी र अनजानमा) कहिलेकाँही मानसिक रोगलाई हिंसासँग जोड्दछ (बावजुद पनि असंख्य वैज्ञानिक निष्कर्ष कि जडान डिबंक)।
मान्यता र उपचार खोज्दै
मानसिक स्वास्थ्य कलंकले सामाजिक असमर्थताको भावनाहरूलाई निम्त्याउँछ। कलंकले केहि व्यक्तिहरूलाई योग्य सहायता खोज्न प्रेरित गर्दछ। धेरै अन्यको लागि, बदनामले मानसिक स्वास्थ्य स्थितिको पहिचान र उपचार रोक्छ।
प्याट्रिक कोरीगन, बेन्जामिन ड्रस, र डेबोरा पर्लिक यसलाई किन कल गर्न कोसिस गर्नुस? असर। यो एक प्रकारको आत्म-कलंक हो जसले एक व्यक्तिलाई विश्वास गर्दछ कि उनीहरूको मानसिक बिरामी एक अस्थायी बोझ हो जुन कहिल्यै हटाउन सकिदैन। व्यक्तिहरू आफ्नो रोगलाई लुकाउन को लागी वा यसको उपस्थितिको लागि अत्यधिक क्षतिपूर्ति दिन सक्छन्। यसले उनीहरूको अवस्थालाई अझ खराब बनाउन सक्छ जब सम्म उनीहरू उचित उपचारको खोजी गर्दैनन्।
२०११ मा मात्र %०% एक मानसिक रोग संग व्यक्ति को आफ्नो अवस्था को लागी कुनै पनि प्रकारको उपचार प्राप्त। यो मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा विभिन्न संरचनात्मक कमजोरीहरूको कारणले हो, तर यो आत्म-कलंकबाट उत्पन्न हुन्छ जुन मानिसहरूलाई उचित उपचार खोज्नबाट रोक्दछ।
निदान र उपचारको अभावले खराब परिणामहरू निम्त्याउँछ, जस्तो कि यो कुनै पनि अन्य प्रकारको दीर्घकालीन रोगको लागि हो। मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू उपचार र व्यवस्थापन गर्न समय लिन्छन्, विशेष गरी यो दिइएको छ कि प्रायः निदान गरिएका व्यक्तिहरूले आफ्नो वयस्क जीवनभर स्थितिको प्रबन्ध गर्न आवश्यक हुन्छ। जब चलिरहेको मानसिक स्वास्थ्य कलंकले समयमै उपचारमा ढिलाइ गर्दछ, यसले जीवनको गुणस्तर कम गर्दछ।
कलंक समाप्त गर्न क्रियात्मक कदमहरू
मानसिक स्वास्थ्य कलंक, र यसको हानिकारक प्रभावहरू, स्थायी हुन आवश्यक छैन। त्यहाँ धेरै चरणहरू छन् जुन तपाईं विश्वव्यापी वकालत संगठनहरूको प्रयास समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि यी विधिहरूले मानसिक स्वास्थ्य कलंकलाई रातोरात हटाउँदैन, तिनीहरूले तपाईंको स्थानीय समुदायमा वर्तमान र भविष्यको मानसिक स्वास्थ्य प्रवचन सुधार गर्दछ।
सुन्नुहोस् र आफैलाई शिक्षा दिनुहोस्
तपाईंको समुदायले मानसिक स्वास्थ्यलाई कसरी बुझ्ने भन्ने बारेमा भिन्नता ल्याउनु अघि तपाईंले सुन्नु पर्छ र आफैलाई शिक्षित गर्नुपर्दछ। मानसिक स्वास्थ्य अत्यन्त व्यक्तिगत छ र मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूले प्रत्येक व्यक्तिलाई फरक पार्दछ। यो अनुभव गरेका व्यक्तिहरूबाट जान्नु आवश्यक छ।
एक मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको साथ दैनिक जीवन वर्णन गर्ने संस्मरणहरू पढ्नुहोस् । मानसिक स्वास्थ्य समस्या संग बाँचिरहेका मानिसहरु संग कुरा गर्नुहोस्, यदि तपाईलाई कोही चिन्छ जो इच्छुक छ। मानसिक स्वास्थ्य स्थितिको गैर-कल्पना विवरण अनुसन्धान गर्नुहोस्। समकालीन फिक्शन मिडिया प्रयोग गर्नुहोस् (भिडियो गेमहरू जस्ता नाईट इन द वुड्स र सेलेस्ट सहित) मानसिक स्वास्थ्यको जटिलता बुझ्नमा मद्दत गर्न।
यदि तपाईं मानसिक स्वास्थ्य संग अनुभव छ, यो सिक्न जारी राख्न महत्त्वपूर्ण छ। अधिक स्वास्थ्य अनुसन्धानले यसको कारण र उपचारहरू खोजी गर्दा मानसिक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र द्रुत रूपमा विकसित हुँदैछ। यदि तपाईं जागरूकता फैलाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं पछिल्लो घटनाक्रम मा अद्यावधिक राख्नु पर्छ।
जब तपाईंसँग मौका हुन्छ, मानसिक स्वास्थ्यसेवाको महत्त्व र यसका वरिपरि जारी रहेका विभिन्न कलंकहरूको बारेमा कुरा गर्नुहोस्। यदि तपाईंले मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा नकारात्मक कुरा गरेको सुन्नुभयो भने, शान्त नहुनुहोस्।
भाषालाई काउन्टर गर्न महत्त्वपूर्ण छ जुन मानसिक रोगले ग्रस्त व्यक्तिहरूप्रति अविश्वास वा वैमनस्यता फैलाउँछ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईले कसैलाई मानसिक स्वास्थ्य कन्डिशनको सहपाठी वा सहकर्मी बोलाउनुभएको सुन्नुहुन्छ भने, यो बोल्नु महत्त्वपूर्ण छ। यस प्रकारको अपमानजनक भाषा (एक मजाकको रूपमा पनि) मानसिक स्वास्थ्य कलंकलाई सामान्य बनाउँछ। यो टाढा वा सम्भव भएमा सम्बोधन गर्नु पर्छ।
एक मानसिक स्वास्थ्य अधिवक्ता बन्ने मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरु र मानसिक रोग संग बाँचिरहेका मानिसहरु लाई ध्यान दिन एक व्यावहारिक तरीका हो। तपाईं स्कूल वा कार्यस्थलमा, र विभिन्न प्लेटफर्महरूमा, जस्तै सोशल मिडिया, ब्लगहरू, र सामुदायिक घटनाहरू सहित, विभिन्न सेटिंग्समा एक वकिल हुन सक्नुहुन्छ। केहि संगठनहरू, जस्तै मानसिक रोगको लागि राष्ट्रिय गठबन्धन र आत्महत्या रोक्नका लागि अमेरिकन फाउन्डेसन, आफ्ना राजदूतहरूका लागि थप औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान गर्दछ।
कुनै वकालत पहल को प्राथमिक लक्ष्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाको राम्रो सौदा गर्न समर्थन संरचनाहरु को थप को लागी जागरूकता र समर्थन लाई हुनु पर्छ। यस तरिकाले अधिवक्ताहरूले प्रगतिशील रूपमा दीर्घकालीन मानसिक स्वास्थ्य कलंक फिर्ता लिन र उत्पादक संलग्नताको वातावरणको साथ प्रतिस्थापन गर्न सक्दछन्।
गैर-कलंकित भाषा प्रयोग गर्नुहोस्
एउटा सानो कार्य जुन कि कसैले पनि मानसिक स्वास्थ्य कलंक संग लड्न को लागी लिन सक्छ तपाईको व्यक्तिगत शब्दावली परिवर्तन गर्न। विशेष गरी, जब सम्भव भए भाषा लाई बदनाम गर्नबाट सावधान रहनुहोस्। केही सामान्य लेबलहरूले पागल, साइको, र लत समावेश गर्दछ। यस प्रकारको भाषा उत्कृष्ठ रूपमा अनुत्पादक हो र सबैभन्दा खराबमा अपमानजनक छ (सन्दर्भमा निर्भर गर्दै)।
यसको ठाउँमा, गैर-कलंकित भाषा प्रयोग गर्नुहोस्। यी शब्दहरू र वाक्यांशहरू मानसिक स्वास्थ्य सेवामा अधिक व्यापक रूपमा स्वीकार गरिन्छ। अर्थ, तपाईं नकारात्मक अर्थ जोखिममा बिना तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
सधैं व्यक्तिको पहिलो भाषा प्रयोग गर्नुहोस्। यो संरचनात्मक तरीका हो जुन व्यक्तिको अवस्था वा अक्षमतालाई तिनीहरूको व्यक्तित्वबाट अलग गर्न डिजाइन गरिएको हो। उदाहरण को लागी, एक स्किजोफ्रेनिया मानिस भन्दा एक स्किजोफ्रेनिक मानिस भन्दा भन्दा बढी उपयुक्त छ।
मद्दत चाहिनेहरूको लागि विकल्पहरू उपलब्ध छन्
मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रत्येक दिन सुधार, अधिक व्यक्ति उपचार को उपयोग को रूप मा। मानसिक स्वास्थ्य स्थितिका लागि तीन प्राथमिक उपचारहरू छन्: थेरापी, औषधि, र समर्थन समूहहरू। सबै विधि सबैका लागि प्रभावकारी हुँदैन, त्यसैले तपाईंको लागि उत्तम उपचार फेला पार्न आफ्नो चिकित्सकसँग परामर्श लिन नबिर्सनुहोस्।
थेरापी मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाहरू प्रबन्ध गर्ने सबैभन्दा पहुँचयोग्य र उत्पादनमूलक विधिहरू मध्ये एक हो। त्यहाँ चिकित्सा को धेरै प्रकार छन्, यो मानसिक स्वास्थ्य समस्या संग बाच्ने मान्छे को एक ठूलो संख्या को लागी एक व्यावहारिक विकल्प बनाउने।
संज्ञानात्मक-व्यवहार थेरपी (CBT) सबै भन्दा लोकप्रिय विकल्पहरू मध्ये एक हो किनकि यसले समयको साथ साथ एक व्यक्तिको जीवनमा मानसिक र कार्यवाही परिवर्तन गर्न सजिलो बनाउन सक्छ। प्राय: जसो सीबीटी डिप्रेशन, चिन्ता, र द्विध्रुवी विकारको प्रबन्धको लागि प्रयोग गरिन्छ - यद्यपि यो संज्ञानात्मक विकारहरूको विस्तृत श्रृंखलाको लागि उत्पादक हुन सक्छ।
इन्टरपर्सनल थेरापी पनि सामान्य र राम्ररी मानिन्छ किनकि यसले भावनाहरूको स्वस्थ अभिव्यक्तिलाई सजिलो बनाउँछ। जस्तो प्रकारको छनौट गरे पनि, थेरापीले प्राय जसो एक प्रशिक्षित र प्रमाणित विशेषज्ञको साथ सम्पर्क गर्दछ। त्यो विशेषज्ञले मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्न व्यायाम र गतिविधिहरू घरमा अभ्यास गर्न डिजाइन गर्न सक्दछ।
चिकित्सा जस्तो, समर्थन समूहहरू आमसञ्चार छलफल मानसिक मानसिक रोग सामना गर्न सहयोग गर्न। समर्थन समूहहरू प्राय: मानसिक रोग वा डेमोग्राफिकको एक विशेष प्रकारमा केन्द्रित हुन्छन्, जस्तै डिप्रेसनको साथ बस्ने आमा, वा बाइपलरका साथ बस्ने वरिष्ठहरू।
तिनीहरू साथीहरूको फराकिलो नेटवर्कको खोजीमा लागिरहेकाहरूको लागि मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्थापन प्रयासलाई समर्थन गर्न उनीहरू एक उत्तम स्रोत हुन्।
बिभिन्न आवश्यकताको लागि विभिन्न समर्थन समूहहरू छन्। उदाहरण को लागी, तैनाती पछि सैन्य कर्मचारीहरु आफ्नो विशेष अनुभवहरु को लागी सहायता समूहहरु मा सामिल हुन्छन् (विशेष गरी PTSD सम्बन्धित)। नयाँ आमाहरू विभिन्न प्रसूतिपूर्व मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू सँगसँगै समस्याहरूको समाधान गर्न सहयोग समूहमा भेला हुन सक्छन्। अल्कोहोलिक बेनामी जस्ता प्रख्यात समर्थन समूहहरूले पनि मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्थापनलाई सहयोग पुर्‍याउन भूमिका निभाउन सक्छ।
योनी खमीर संक्रमण को लागी चिया रूख को तेल
औषधी मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्थापनको सबैभन्दा लोकप्रिय तरीका हो। दिमागमा रासायनिक असंतुलनको कारणले गर्दा उपचार गर्ने अवस्थामा औषधी सुविधाजनक र प्रभावकारी हुन्छ। यद्यपि सबै मनोवैज्ञानिक औषधीहरू सबै बिरामीहरूको लागि काम गर्दैनन्। केही नियमहरूले पदार्थ दुरुपयोगको सम्भावना बढाउँछन् वा साइड इफेक्ट हुन्छन् जसले दिन प्रति दिनको मुड र कल्याणलाई नकरात्मक प्रभाव पार्छ।
मानसिक स्वास्थ्य औषधीहरू धेरै व्यापक कोटीहरूमा पर्दछन्: एन्टिसाइकोटिक्स, एन्टीडिप्रेससन्टहरू, र मुड स्टेबिलाइजर्स। प्रत्येक प्रकारको ड्रगले विभिन्न प्रकारको अवस्थाको व्यवहार गर्दछ, र बिभिन्न सम्भावित साइड इफेक्टहरू छन्। यी औषधीहरू प्रभावकारी छन्, तर तिनीहरू मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको उपचार गर्दैन - ती केवल लक्षणहरू कम गर्दछन्। कुनै नयाँ औषधि सुरू गर्नु अघि जोखिम र फाइदाहरूको बारेमा आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्।
सम्बन्धित : तपाईको मानसिक स्वास्थ्यको लागि सहि औषधि फेला पार्नु सहि डाक्टर पत्ता लगाउन सुरु हुन्छ
मानसिक स्वास्थ्य मुद्दाहरूको साथ साथी र परिवारलाई सहयोग गर्दै
मानसिक स्वास्थ्य गम्भीर समस्या हो। मानसिक स्वास्थ्य कलंक भनेको एक मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको साथ बाँचिरहेका व्यक्तिहरूको उपचार र अवसरहरूको लागि महत्वपूर्ण बाधा हो। यस कलंकलाई तोड्न गाह्रो हुन सक्छ, तर यसले असंख्य फाइदाहरू ल्याउँदछ, जसमा मानसिक रोगका साथ जीवन बिताउनेहरूलाई उनीहरूले एक परिपक्व र उत्पादक जीवनशैलीको आनन्द उठाउन आवश्यक उपचार प्राप्त गर्न अवसरहरू बढाउने अवसरहरू सहित।
मानसिक मुद्दाहरूको साथ मित्र र परिवारलाई सहयोग पुर्‍याउनु महत्त्वपूर्ण पहिलो चरण हो। यो समय संयुक्त राज्य अमेरिका र विश्व भर मा सार्वजनिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न को लागी हो।
तपाईं गर्भवती हुँदा antidepressants लिन सक्नुहुन्छ?
के तपाइँ पछि जीवन मा ल्याक्टोज असहिष्णु हुन सक्नुहुन्छ
एक गर्भवती महिला ले दुखाई कम गर्ने औषधि लिन सक्नुहुन्छ
कति समय यो zoloft को लागी काम सुरु गर्न को लागी लिन्छ
वालमार्ट मा एक फ्लू शट कति छ
कुनै स्वास्थ्य बीमा छैन तर एक डाक्टर हेर्न आवश्यक छ